सोच्दैनसोचेको बेडसिन एक्कासी दिनुप¥यो’ ~ FMS News Info
सोच्दैनसोचेको बेडसिन एक्कासी दिनुप¥यो’
चलचित्रमा हट बेडसिन दिएपछि एक्कासी चर्चामा आएकी नायिका बिनु खड्कासँग नेपालपाटी डट कमले गरेको कुराकानीः
केही समय अघिमात्र चलचित्रमा अभिनय सकेँ । आजभोलि तीजको भिडियो सुटिङमा व्यस्त छु । ७÷८ वटा भिडियोमा अभिनय गरेँ । अझै केही अभिनय गर्न बाँकी छन । नेपाली हिन्दु नारीहरुको महान चाड तीजको गीतमा रमाईलो गर्दै अभिनय गरिरहेको छु ।
तपाई धेरै राम्रो नाच्नुहुन्छ, कहाँबाट सिक्नुभयो ?
त्यो त दर्शकको हेर्ने नजर हो । मैले सकेसम्म अभिनयमार्फत दर्शकलाई न्याय गर्ने गरेकी छु । त्यसका लागि धेरै मिहेनत पनि गरेको छु । सुर्खेतमै डान्स क्लास लिएँ । काठमाडौँ आएपछि काम गर्दै जाँदा निखारता ल्याएँ ।
गीतसंगितमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
काठमाडौँमा डान्स प्रतिष्पर्धा थियो । त्यसमा म पहिलो भएँ । सवैले तिम्रो डान्स एकदम राम्रो छ भन्नुभयो । मैले तत्कालै काम पनि पाइहालेँ । सुर्खेतको हरि विष्ट दाइको गीतबाट मैले अभिनय यात्रा थालेकी हुँ । अभिनय गर्न थालेको पाँच वर्ष बितिसकेको पत्तै भएन ।
यसबीचमा के–के गर्नुभयो ?
म्युजिक भिडियो र चलचित्रमा अभिनय गरेकी छु । ‘रोल्पा रोग’ बाट मैले चलचित्रमा प्रवेश गरेकी हुँ । अहिले विन्दास–३ मा पनि अभिनय गरेकी छु ।
अभिनयको क्रममा सवैभन्दा गाह्रो कुन बेला लाग्यो ?
बेड सिन दिँदा एकदम गाह्रो भयो । त्यसैले विन्दास–३ चलचित्रको अभिनय गर्दा नै सवैभन्दा गाह्रो भयो भन्नुपर्छ ।
पहिला नै बेड सिन हुन्छ भनिएको थियो कि वीचमा कथाले माग्यो ?
पहिला बेड सिनको कुरा थिएन । नेपालगञ्जमा सुटिङको क्रममा शुभेच्छाजी र तिम्रो वेड सिन राख्नुपर्ने भयो भनेर निर्देशकले भन्नुभयो । बेडसिन दिनुपर्ला भनेर सोचेकी थिइनँ । बेडसिन अहिलेसम्म मैले गरेकी पनि थिइनँ । नसोचेको कुरा एक्कासी गर्नुपर्दा निकै अप्ठ्यारो भयो । त्यो सिन सायद राखिदैन पनि होला ।
सेन्सरले नै काट्ने गरी कस्तो सिन दिनुभयो त ?
निर्देशकले त्यस्तै गर्नुभयो । मैले पहिलो पटक बेड सिन गरेकी हुँ । जे होस, परिवार बसेर हेर्न मिल्छ । मनिष र शुभेच्छा तथा राकेश र मेरो बेडसिन छ । चलचित्र हेरेर प्रतिक्रिया दिन म सम्पूर्ण दर्शकलाई अनुरोध गर्दछु ।
भनेपछि फिल्ममा आउन जे भएपनि ठीकै छ भन्नुभयो हैन ?
त्यस्तो त हैन । फिल्म नै गर्नका लागि मैले बेडसिन दिनुपर्छ भन्ने छैन । राम्रो गरेर नै स्थापित हुनुपर्छ । बेडसिन नै दिएर अगाडि बढ्ने भए, हरेक कलाकार त्यसरी नै अगाडि बढ्थे होला । नकारात्मक भन्दा पनि सकारात्मक रुपमा नै जानुपर्छ । बेड सिनको बारेमा म आफैँ पनि कन्फ्युज भइरहेकी छु । जुन रुपमा मिडियामा प्रचार गरियो, त्यसले नराम्रो पारेको छ ।
अव कसरी अगाडि बढ्ने सोचिरहनुभएको छ त ?
चलचित्रको अफरहरु आइरहेका छन । स्टोरी हेरेर मात्र अव काम गर्छु ।
भनेपछि विन्दास–३ बाट धेरै पाठ सिक्नुभयो ?
हाँस्दै, धेरै कुरा सिकियो ।
नयाँ नायिकालाई तपाईको सुझाव के छ ?
धेरै कुरा बुझेर, सल्लाह, सुझाव लिएर मात्र आउनुहोस भन्न चाहन्छु ।
लभ के हो ?
लभ विना कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । तर लभको परिभाषालाई संकुचित रुपमा लिने गरिएको छ । लभलाई उमेर पुगेका केटा र केटीको विषयमा मात्र हेरिन्छ । त्यो गलत हो । लभ त आमा, बुबा, दाजु, भाई, दिदी, बहिनी सवैसँग हुन्छ ।
विन्दास–३ मा मेरो नाम नकारात्मक रुपमा आएको छ । जसरी प्रचार गरियो, त्यसरी मैले अभिनय गरेको छैन । तपाईहरुले चलचित्र हेरेर मुल्यांकन गरिदिनुहोला । साथै मेरो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा नेपालपाटी डट कमलाई धन्यवाद । भिडियो हेर्न तलको बाकस थिच्नुहोस